२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा वीर अस्पतालको भवन | Ekhabar Nepal
अर्थ माघ २६ २०७४ ekhabarnepal
काठमाडौं । साढे २ वर्षमा वीर अस्पतालको दुई तला अन्डरग्राउण्ड पार्किङसहितको ७ तले नयाँ सर्जिकल भवन बन्ने भएको छ । भवन २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा सरकारले बनाउन लागेको हो ।
उक्त भवन १७ रोपनी जमिनमा अस्पतालको उत्तरपट्टिको पहिले नर्सिङ कलेज भएको स्थानमा बन्न लागेको अस्पतालले जनाएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति प्राडा गणेश गुरुङले यो भवनमा कुनै पनि दातृ निकायको सहयोग नभई पूर्ण रुपमा नेपाल सरकारको स्वमित्वमा बन्न लागेको बताए । “हामीले भवन बनाउन यही महिना सम्झौता गरिसेका छौँ, अबको एक महिनामा निर्माण कार्य सुरु हुन्नेछ,” उनले भने, “भवन अन्डरग्राउण्ड २ तल्ला पार्किङसहित माथि सात तलाको हुनेछ ।”
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र जेआईइसी तथा शर्मा रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिबीचको जोइन्ट भेन्चरसँग अबको साढे २ वर्षमा सर्जिकल ब्लक बनाउने सम्झौता भएको छ । “सरकारले यसलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेको छ,” उपकुलपति गुरुङले भने, “ठेकेदार कम्पनीले इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने पनि करिब ३ देखि ४ वर्ष समय लाग्न सक्छ ।”
वीर अस्पताल कम्प्लेक्समा सर्जिकल ब्लक, मेडिकल ब्लक र ट्रमा ब्लक रहनेछन्न् । ३ वटा ब्लकमध्ये ट्रमा ब्लकको निर्माण भई सेवा सुरु भइसकेको अस्पतालका निर्देशक डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले बताए । उनले भने, “नयाँ भवनमा १६ वटा ओटी, ३० वटा सर्जिकल आइसियूसहित ६ सय ५० बेड रहने छन् । नयाँ भवन बनेपछि बीर अस्पतालमा बेड पाउने समस्या हटेर जाने छ । ”
नयाँ भवनमा कस्तो सुविधा पाइन्छ ?
वीर अस्पताललको नयाँ सर्जिकल भवनमा ट्रान्सप्लान्टदेखि सर्जिकल सबै सेवा उपलब्ध हुने छ । यसमा न्यूरो सर्जरी, साइभर लिभर, बोनम्यारो, मुटुलगायतको प्रत्यापोरण गरिनेछ । साथै संसारभर चलन चल्तिमा रहेका विकसित किसिमको अपरेशन समेत गरिने अस्पतालका निर्देशक डा. बस्नेतले बताए । उनले भने, “नयाँ भवन बनेपछि कलेजो, बोन म्यारो, मुटुलगायतको प्रत्यापोरण सेवा सुरु गर्नेछाैं ।”
अहिले वीर अस्पतालमा दिमागको तथा ओपन हार्ट सर्जरी सेवा छैन । नयाँ भवन बनेपछि सेवा सेवा दिने डा.बस्नेत बताउँछन् । त्यसैगरी, तेस्रो तलामा रेडियोलोजी डिपार्टमेन्ट रहनेछ । सोही ठाउँबाट सिटी स्क्यान एक्सरे, एमआरआइलगायतको सेवा प्रदान गरिनेछ । चौथो तलामा ३० वटा अपरेशन थिएटर रहेछन् । माथिल्लो तलालाई अस्पतालले सभा हलको रुपमा निर्माण गर्ने गरी तयारी गरिएको निर्देशक डा. बस्नेतले बताए ।